Cudur Aan Wali La Aqoonsan Oo Ka Dillaacay Dalka Hindiya – somalilandtoday.com
Cudur Aan Wali La Aqoonsan Oo Ka Dillaacay Dalka Hindiya
(SLT-Delhi)-Saraakiisha dalka India ayaa baadhaya waxa sababay cudur aan wali la aqoonsan waxa uu yahay oo sababay in in ka badan 140 qof dhammaadkii toddobaadkii tagay oo kaliya la dhigo cusbitaalka.
Dhakhaatiirta ayaa sheegaya in dadka uu xanuunkani ku dhacay oo ka yimid deegaanka Eluru ee gobolka Andhra Pradesh, lagu arkay astaamo badan oo iskugu jira lallabbo, suuxdin iyo miyir beel.
Dhawr sariirood oo yaalla cusbitalka dowladda ee deegaankaasi ayaa la faaruqiyay si loo isticmaalo haddii loo baahdo oo la keeno bukaanno intaasi ka badan.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in bukaannada la xanuunsan cudurkan dhammaantood laga baadhay cudurka saf-marka ah ee Covid-19 balse markii dambe ay caddaatay in ayna cudurkaasi qabin.
“Waxaan meesha ka saarnay in xanuunkani uu ka dhashay biyo ama hawo sumeysan kaddib markii masuuliyiintu ay booqdeen meelaha ay dadku ku xanuunsadeen,” ayuu yidhi. “Waa xanuun aan la aqoonin oo nagu cusub, waxaana lagu ogaan karayaa oo kaliya baaritaanka shaybaarka.”
Si kastaba ha ahaatee xisbiga mucaaradka ah ee Telugu Desam, ayaa ku baaqay in baadhitaan lagu sameeyo dhacdadan, iyagoo ku adkeysanaya in cudurkani uu ka dhashay biyo ama hawa sumeysan.